Maitiro eArtificial Intelligence ari kuvandudza Assistive Tekinoroji - NewGenApps
Nekuda kweizvozvo, isu tiri pano nemagirazi akangwara ayo anogadzirwa nechikwata cheUniversity yeOxford, UK, kusanganisira maurososiositi uye musayendisiti wekuona wemakomputa. Vakavaka iyo Augmented reality girazi rinotarisa pane imwe nzvimbo yekuona. Izvi zvakawedzera musiyano wemufananidzo uye zvakaratidza maitiro avo nerubatsiro rweAR. Chirongwa ichi chichange chiri pamusika mugore rinouya uye Google iri kubatsira nebasa rekutsvagisa uchiisa mari yemadhora mazana matanhatu nemakumi mashanu nesere pairi.
Chirwere cheParkinson ishoko rinoshandiswa kureva neurodegenerative brain disorder umo munhu anotambura nekuda kwekutadza kumira zvakanaka kana kudonha pamwe nezvimwe zviratidzo zvakawanda. Vatsvagiri veYunivhesiti yeHouston parizvino mavauya ne smartphone application iyo inobatsira mukuverengera maitiro nerubatsiro rwebiofeedback rehabilitation inopfeka.
Tichiri kutaura nezve hurema hwemuviri, kune zvinhu zvakawanda zvinokatyamadza mairi saka isu tinogona kufunga sekuvharirwa mukati memuviri wedu nepfungwa dzinoshanda asi pasina kugona kutaura kana kufamba, kunyangwe kutaurirana nemuviri kunomanikidza. Pamusoro pazvo, locked-in syndrome haina mushonga. Nekudaro, tekinoroji ine mamwe manomano pasi maoko avo zvinoenderana nehuropi-kombuta interface tekinoroji. Nerubatsiro rwehunyanzvi hwakadaro, munhu anogona kupindura nyore mubvunzo mukuti kwete kana hungu nepfungwa chete. Muchina uyu wakagadzirwa nevamwe vakangwara kudzidza zvishandiso uye maelectrodes anogona kupa huchokwadi hweinopfuura 80 muzana.